Venerable Kusalasami: သီရိလင်္ကာနှင့် မဟာဗောဓိ သမိုင်းအပိုင်းအစ
By ashin kusalasami on January 04, 2011
(Tawfik Hamid ရဲ့ From the heart ofaMuslim ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပါတယ်။) ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်နဲ့ မွတ်စလင်တစ်ယောက်...
“စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ”။ မြန်မာစကား အလွန်နားထောင်၍ ကောင်းပါ၏။ ဘဝတွင် ရရှိလာသည့် အသိအမြင်အတွေးအခေါ်များသည် စာအုပ်စာပေအပေါ်တွင် များစွာ မ...
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အလောင်းမင်းတရားကြီးဟု ကျော်ဇောသော မင်းတစ်ပါးရှိခဲ့ဖူး၏။ ထိုမင်းလက်ထက်တွင် အမိန့်တော်ပြန်တမ်းတစ်ခုကို ထုတ်သတဲ့။ ထိုအမ...
သံယောဇဉ် ..................... (၁) “ဗရုက်သုက္ခကြီးနဲ့ … ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ၊ ရဟန်းမ(ဘိက္ခုနီ)လုပ်ပြီး ဒီလောက်တောင် အချစ်ကြီးရသလား” ...
....................................................... ဂျာမနီနုိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင် အပေါင်းတို...
VEN. KUSALASAMI GUTLEUTSTR 127, 60327, FRANKFURT AM MAIN Telephone: +4915214489565 Email: kusalasami@gmail.com Venerable Kusalasami was...
အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ဥပမာ (၁၄) အရှင်ကုမာရကဿပက နောက်ထပ် ဥပမာတစ်ခုဖြင့် ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုဥပမာသည် ယနေ့ခေတ်ကာလ အများသိဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။...
ရင်ဘက်ထဲက ဆလိုက်မီးများ စာမရေးဖြစ်တာလည်း ကြာလှပေါ့။ စိတ်ကူးထဲမှာ ရေးဖို့တေးထားတာလေးတွေကလည်း မရေးတာကြာတဲ့အခါ အစရှာလို့ မရတတ်တော့ဘူး။ ရေးခ...
၄ ရက်တရားစခန်းနှင့် ဓမ္မသင်တန်း ဖိတ်ကြားလွှာ
၄ ရက်တရားစခန်းနှင့် ဓမ္မသင်တန်း ဖိတ်ကြားလွှာ (Update on 27 June) …………………………………………. တရားစခန်း မတည်အလှူရှင်များ ……………………………………...
THE CROWN FOR GOLDEN PAGODA BELL TOWER
လမင်းကို ခိုးလို့ ရခဲ့ရင်